Guqula umbala weenwele ngeFotohop ngokukhawuleza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Photoshop, Amaqhinga, Tutorials
Guqula umbala weenwele nge Photoshop yindlela enomdla yoku jonga ukuba sinesimbo esithile ngaphandle kokuya kwizinwele Ke, ukugcina kancinci kwaye ujonge ukuba isimbo sethu esitsha sibonakala sihle okanye sibi. Ngaba ungathanda ukwazi ukuba iinwele zakho zolunye umbala zijongeka njani? Ndiyabulela kolu hlobo lwamaqhinga ungazisindisa kakhulu entloko kwaye uphephe ukutshabalalisa iinwele zakho kakhulu.
Funda indlela enomdla yokwenza Guqula umbala weenwele mbulelo Photoshop Isixhobo esimnandi seAdobe sokwenza zonke iintlobo zeeprojekthi zoyilo. Funda ukusebenzisa iziseko zenkqubo ngelixa ubeka ukusetyenziswa okunomdla njengomboniso weenwele ezintsha. Yenza uyilo inomdla ukuba inokusebenza njenge template ukuze bakwazi ukuyenza kwixesha elizayo kwindawo yokwenza iinwele, jonga ukuba uyayithanda na le touch intsha yombala.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukuba sifuna ukutshintsha umbala weenwele zethu yile khangela ifoto elungileyo enokusetyenziselwa oku, kuyacetyiswa ukuba ifoto ibe nomgangatho olungileyo wokukhanyisa ukuze iinkcukacha zombala ziqondwe ngakumbi. Singakhangela kwi-Intanethi ukukhangela ukunceda usikhuthaze.
Emva kokuba sinomfanekiso, into elandelayo esiyenzayo ukuyivula Photoshop ukuqala ukusebenza.
Ngomfanekiso kwi-Photoshop, into elandelayo esiza kuyenza yile Phinda kabini umaleko wethu womfanekiso kwaye wenze ifayile ye- uhlengahlengiso / umaleko wokugcwalisa (umaleko omnye kumbala ngamnye).
Ukusebenza kwesi sixhobo kulula, sisebenzisa umbala esiwukhangelayo Ukutshintsha iiparameter zokulungelelanisa ugqibezelo sijika umaleko ngonqumlo ulawulo + i. Ngale nyathelo lokugqibela siyakwazi ukufihla umbala kumfanekiso wonke, kamva siza kupenda kuphela indawo yeenwele.
Siyaqhubeka nokwenza uhlengahlengiso lwe-hue saturation ngemibala esiyifunayoNje ukuba sigqibe, into elandelayo esiza kuyenza kukubeka amagama ngemibala (kucetyiswa ukuba isebenze ngendlela elungeleleneyo). Ukuba yonke into ichanekile, kuya kufuneka sibe nesiphumo esifana nesikumfanekiso ongezantsi.
Into elandelayo esiza kuyenza kukuqala Faka umbala kumfanekiso wethu ukuvumela iileya esele sizenzile ukuba zisebenze kwiindawo ezithile ngokusebenzisa ibrashi. Ngebrashi siza kuqala ukwenza ubume obucacileyo, ukwenza oku kufuneka siye kulwahlulo ngalunye kwaye siqale ukudlulisa ibrashi ngaphezulu. Ngokufanelekileyo, ukusebenza ngebrashi kukutshintsha amaxabiso: ukukhanya, ukuhamba, ubunzima.
Kwimizuzu embalwa unokutshintsha umbala weenwele zakho kwaye ujonge ukuba loo ndlela uyithandayo kangaka ibonakala intle kuwe okanye hayi. Uphando, cinga, uziqhelanise kwaye ungayeki ukuzama kule wand magic ibizwa ngokuba Photoshop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Guqula umbala weenwele ngeFotohop
Yintoni esifanele siyibuze umthengi ngaphambi kokuyila ilogo yakhe?